Sinamoni Roll Nehuchi
Muvhuro 23 Chivabvu 2022
Sinamoni Roll Nehuchi Denga Kudonha isinamoni roll inozadzwa neuchi yakachena huchi hunoshandiswa netii. Pfungwa yaive yekubatanidza chikafu zviviri zvinoshandiswa zvakasiyana uye gadzira chigadzirwa chitsva chose. Vagadziri vakafemerwa nekuumbwa kweiyo sinamoni roll, ivo vakashandisa chimiro chayo chekurukisa sehombodo yeuchi uye kuti vatore dhinamoni mitsara ivo vaishandisa nyuchi yekuzvitsaura uye kurongedza sinamoni rolls. Iyo ine zviverengero zveEjipitus zvinoratidzwa pamusoro payo uye ndeyekuti vaIjipita vanhu vekutanga vakaziva kukosha kwesinamoni uye vakashandisa huchi sepfuma! Ichi chigadzirwa chinogona kunge chiri chiratidzo chedenga mumakapu ako etii.
Svondo 22 Chivabvu 2022
Chikafu Inwa Kunaka yakaita sedombo rakanaka raunonwa! Isu takagadzira musanganiswa wezvinhu zviviri izvo zvakashandiswa zvakasiyana netiyi: Dombo candies uye mandimu emango. Iyi dhizaini inodyiwa chose. Nekuwedzera marimu elemoni kuchimiro chekiswiti, kuravira kwawo kunova kuri nani zvikuru uye kukosha kwayo kwekudya kunowedzera nekuda kwevhithamini yemalamoni. Vagadziri vacho vakangodzorera matanda ekuti matombo emakristuru aregeredzwe nechidimbu chearimu yakaoma. Inwa Runako muenzaniso wakakwana wenyika yemazuva ano iyo inounza runako uye kushanda zvakanaka pamwe chete.
Mugovera 21 Chivabvu 2022
Chinwiwa Dhizaini iyi ndeyekudhiza nyowani neChia, pfungwa hombe yaive yekugadzira jongwe ine huwandu hwekuvira zvinoverengeka .Kugadzira uku kunouyawo nemhando dzakasiyana dzaigona kuoneka pasi pechitema svinu izvo zvinoita kuti zvikwane kumapati nemakirabhu. Chia inogona kutora uye kuchengetedza chero chinwiwa uye ruvara kuitira kana munhu akaita jongwe neFlantfly anogona kuwana zvakasiyana flavour nhanho nedanho.Ukoshi hwehutano hwechigadzirwa ichi hwakanyanya uchienzaniswa nemamwe cocktails uye izvo zviri zvese nekuda kweChia yakakura yehutano hwehutano uye yakaderera macalories. . Iyi dhizaini chitsauko chitsva munhoroondo yezvinwiwa uye cocktails.
Chishanu 20 Chivabvu 2022
Ice Mold Masikirwo agara ari mamwe ezvinyorwa zvakakosha zvekufuridzirwa kwevakagadziri. Iyo pfungwa yakauya kune pfungwa dzevagadziri nekutarisa munzvimbo uye mufananidzo weMukaka Way Galaxy.Chinonyanya kukosha mune iyi dhizaini yaive yekugadzira chimiro chakasarudzika. Mazhinji zvigadzirwa zviri mumusika zvinotarisa pakugadzira iyo yakanyanya kujeka asi mune iyi dhizaini yakagadzirwa, vagadziri vakatarisa nemaune mafomu ayo akagadzirwa nemaminerari apo mvura ichishanduka kuita ice, kunyatsojeka kuti vagadziri vashandure chisiko kuita kwakanaka. Iyi dhizaini inogadzira iyo inotenderera spherical fomu.
China 19 Chivabvu 2022
Fodya X alarm, alarm yekusvuta kune vanosvuta kuvaita kuti vazive zvavari kuzviitira ivo vachiri kuzviita. Iyi dhizaini chizvarwa chitsva chemidzanga yefodya. Ichi dhizaini chinogona kuve kutsiva kwakanaka kushambadzira kwakadhura kupesana nekuputa uye kune huwandu hwepfungwa dzevanoputa kupfuura chero humwe hushambadziro hwakaipa kushambadzira .Ine chimiro chiri nyore kwazvo, mafirita anodhindwa neinki isingaoneki iyo inofukidza nzvimbo isina kunaka yematehwe necuff imwe neimwe sketch ichaoneka yakajeka saka necuff imwe neimwe uchaona moyo wako uchisviba uye iwe unoziva zviri kuitika kwauri.
Wuhan Pixel Box Cinema Cinema Chipiri 28 Chikumi
Opx2 Kuisirwa Optic Muvhuro 27 Chikumi
Vivit Collection Mhete Uye Mhete Svondo 26 Chikumi
Sinamoni Roll Nehuchi Chikafu Chinwiwa Ice Mold Fodya Shanduko Yebhasikoro Yokupaka